20°17′19″S 44°19′04″E﻿ / ﻿20.288690°S 44.317820°E﻿ / -20.288690; 44.317820
Isam-ponina 130 383 mponina
Morondava dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Morondava, Faritanin'i Toliary. Ny isam-poniny dia 130 383 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 50899 ary ny kaodin-distrika dia 508;
7 Lafiny ara-pinoana : Ny anjara toeran'ny Eglizy Katôlika
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia >75%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mais. Ny isan'omby dia 1500. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mangahazo. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 100 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 10 ny mponina no manao asa tanana. 50 ny mponina no miasa tany. 25 ny mponina no miasa amin'ny fanjonoana. 5 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 10 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 400 no isan'ny kisoa.
Misy masoivohon'ny banky. Misy seranam-piaramanidina akaikin'ilay tanàna. Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana hopitaly na toeram-pitsaboana ao. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Misy fianarana ambaratonga faharoa (lise). Ahitana orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50. Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 50. Misy tranom-pitsarana maharitra any. Ahitana seranana an-drenirano amin'ilay tanàna. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara maivana base. Ahitana lalana godorô ao amin'ny kaominina. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona.
5 isan-jaton'ny mponina no tena mahantra dia mahantra. 65 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 3 volana. 5 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 25 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Lafiny ara-pinoana : Ny anjara toeran'ny Eglizy KatôlikaHanova
Raha atao indray mijery ny tantaran’ny Diosezin’ny Morondava dia ireo misionera spiritana sy zezoita no nitondra voalohany ny Vaovao mahafaly tany amin’iny faritra Menabe iny, fa tamin’ny taona 1928 no nandraisan’ireo misoneran’ny Lasalety ny Misiona tao, ka ry zareo amerkanina no nanomboka izany.Tamin’ny 14 Septambra 1955 no natsangana ho Diosezy i Morondava ary ireto avy ireo Eveka nifandimby tao: Mgr Paul Girouard m.s(1955-1964), Mgr Bernard RATSIMAMOTOANA m.s (1964-1998), Mgr Donald PELLETIER m.s (2000-2010) ary Mgr RAHARILAMBONIAINA Marie Fabien o.c.d (2010-…)
Raha momba ny ara-pastoraly indray no jerena dia zavatra iray nomena ny anjara toerany manokana ny fanabeazana ao amin’ny Diosezin’i Morondava. Maro ireo trano sekoly naorina, indrindra ny any ambanivohitra.Nosokafana tamin’ny taona 2012 ny ISCaMen (Institut Supérieur Catholique du Menabe) izay ahitana sampam-pianarana efatra: Paramedicaux, Pedagogie, Inforamatique ary ny Gestion, ka vao avy namoaka ny andiany faharoa ity sekoly ambony ato amin’ny Diosezy ity. Ny sampana Pedagojia moa dia natao hamokatra ireo mpampianatra ho an’ny Sekoly katolika ato amin’ny Diosezy na koa amin’ny fanjakana na tsy ho an’ny tsy miankina hafa. Misy ihany koa ny fampiofanana isan-taona omena ireo tanora izany efa manana ny “bacccalaureat” mba ho mpampianatra ka anantin’ny iray volana no anaovana izany. Ary mbola mifandraika amin’izay fanabeazana izay ihany, dia ny fanafaran’ny Diosezy ireo fikambanan-drelijozy maro hiasa aty Menabe mba hiandraikitra mivantana izany asa fanabezana izany indrindra any ambanivohitra ary koa hiantsoroka ny asa pastoraly isan-karazany. Izay sy izay no mahakasika ny fanabeazana.
Raha ny momba ny ara-pastoraly manokana indray no jerena dia vao avy niatrika Sinaody manokana ho azy ny Diosezy izay natao nandritra ny telo taona (2012-2015), “Kristy avao ro hazomanga soa” no teny fanevana tamin’izay. Ka ny tena antony nanaovana azy dia ny mba hijerena amin’ny antsipiriany ny fampandrosoana ny asa pastoraly: ny lesoka, ny tsara tokony ho tohizana ary ny zava-baovao tokony hampiharina araka ny soridalan’ny Fiangonana Katolika. Nisy lohahevitra telo ambin’ny folo lehibe no navoitra nandritra izany, ireto avy izy ireo: Ny Fiangonana eto an-toerana, ny litorjia, ny fifampiresahana amin’ny hafa finoana, ny firaisam-pinoana, ny fandevanana sy ny fivavahana amin’ny razana, ny fanabeazana, ny ministera sy ny fiainan’ny pretra ary ny misionera, ny katesizy, ny relijiozy sy fiantsoan’Andriamanitra, ny fianakaviana sy ny sakramentan’ny fanambadiana, ny fampivoarana ny maha olona, ny tanora, ary ny katekista. Anisan’ny tanjon’ny sinoada ihany koa ny hirosoana bebe kokoa amin’ny maha iraka ny Fiangonana.
Anatin’ny fampiharana ny ireo tsoa-kevitra tapaka nandritra ny sinaoda ny Diosezy ankehitriny, ka ny lohahevitra Fiangonana eto an-toerana sy ny litorjia no jerena manokana amin’izao. Ny fanokafana Fiangonana vaovao no tena imasoana amin’izany ka ny kristianina lahika no miandraikitra izany mivantana sy ny famelomana azy na dia eo aza ny pretra ary efa maro ireo zana-piangonana vaovao nosokafana. Mifandraika amin’izany ihany koa ny famangiana tokantrano kristianina ataon’ny pretra sy katekista ka amin’izany no tena ahitana ny zava-misy iainan’ny kristianina sy amborahany amin’ireto mpamangy azy ireo zava-manahirana azy.Manaraka izany, noezahina ny fanomezana lanja manokana ny vavaka eo amin’ny ankohonam-piainana kristianina na ny tranainy na ny vaovao: fitsaohana ny sakramenta masina, sapile, konfesy, sns. Ary anisan’ny vokatry ny sinaoda ihany koa ny fisian’ny filan-kevitry ny Diosezy ka ny volana Septambra lasa teo no nanombohana izany voalohany. Ireto avy ireo mpandray anjara amin’izany: pretra, relijiozy, katekista, komitim-piangonana, mpampianatra, seminarista, ny fikambanana masina rehetra, ary ny Eveka ray aman-dreny ka ny zavatra atao amin’izany dia ny tatitra amin’ny zava-misy any amin’ny paroasy sy distrika ka anolorana.
Soso-kevitra sy fanamarihana ary ny ezaka mbola hatao. Amin’io ihany koa no anoloran’ny Eveka soridalana arahina mandritra ny taona pastoraly vaovao.Manaraka izany, mba hisian’ny fandrosoan’ny asa pastoraly any amin’ny paroasy sy distrika dia nozaraina ho vikaria episkopaly dimy ny Diosezy ka samy manana ny vikera episkopaliny tsirairay avy. Ireto avy ireo vikaria ireo: avaratra, avaratra atsinana, atsinana, afovoany atsimo, ary Morondava antampon-tanana.
Ireto ary misy tarehimarika vitsivitsy mahakasika ny Diosezy ny taona 2015: a. PRETRA: 63; Diosezianina = 13; Relijoozy = 50. b. RELIJIOZY: 164 ka 08 Lahy ary 156 Vavy. c. BATEMY: 3 491 d. KOMINIO VOALOHANY 924 e. FANKAHEREZANA: 859 f. MARIAZY: 347
Ahitana miaramila ao amin'ilay kaominina. Tapaka in-3 ny lalana tao anatin'ny taona 1999-2001. Ahitana polisy ao amin'ilay kaominina. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Morondava&oldid=1043872"
Dernière modification le 11 Febroary 2022, à 17:32
Voaova farany tamin'ny 11 Febroary 2022 amin'ny 17:32 ity pejy ity.